Real Madrid oo guul muhiim ah kaga gaartay kooxda Osasuna garoonkeeda Santiago Bernabeu… SAWIRRO – Gool FM
Real Madrid oo guul muhiim ah kaga gaartay kooxda Osasuna garoonkeeda Santiago Bernabeu… SAWIRRO
(Madrid) 25 Sebt 2019. Kooxda Real Madrid ayaa guul muhiim ah kaga gaartay dhigeeda Osasuna garoonka Santiago Bernabeu, kaddib markii ay ku garaacday 2-0, kulan ka tirsanaa horyaalka La Liga ee dalka Spain.
Qeybta hore ee dheesha ayaa lagu kala maray 1-0 ay ku hogaamineysay kooxda Real Madrid.
Daqiiqadii 36-aad Real Madrid ayaa hogaanka u qabatay dheesha waxaana 1-0 ka dhigay Vinicius Junior, iyadoo uu goolkan ka caawiyay saaxiibkiis reer Germany ee Toni Kroos.
Qeybta labaad marka dib leysugu soo laabtay labada kooxood ayaa waxay soo bandhigeen qaab ciyaareed fiican, inkastoo Real Madrid ay abuurtay fursado halis ah ee goolal loo filan karay, maadaama ay ku ciyaareysay garoonkeeda Santiago Bernabeu.
Daqiiqadii 72-aad Rodrygo ayaa hogaanka u sii dheereeyay kooxda Real Madrid markii uu ciyaarta ka dhigay 2-0.
Ugu dambeytntii dheesha ayaa ku soo dhamaatay 2-0 ay kooxda Real Madrid saddexda dhibcood kaga qaadaty naadiga Osasuna garoonka Santiago Bernabeu.
Real Madrid ayaa guushan ay ka gaaratay kooxda Osasuna waxay ka dhigan tahay inay hogaanka u qabtay horyaalka La Liga ee dalka Spain, kaddib markii ay aruursadeen 14 dhibcood.
“Messi ayaa ah kan ugu fiican xilligan & guud ahaan taariikhda kubadda cagta adduunka” – Xiddig Liverpool ah
Kooxaha Chelsea, Liverpool oo guulo raaxo leh gaaray, Man United oo si dirqi ah ku soo baxday & guud ahaan kulamadii laga ciyaaray Carabao Cup…+SAWIRRO